Sida looga fogaado iskuxirayaasha gudbinta raadinta Google | Laga soo bilaabo Linux
Sida looga fogaado iskuxirida xiriiriyeyaasha raadinta Google
Google isticmaal xiriiriye ka dib u wareejin in la sameeyo a raadinta of the qasabno.
Nasiib wanaag, waxaa jira dhammaystirnaanta waayo, Firefox iyo Chrome /chromium kaas oo meesha ka saaraya dib u wareejinta isla markaana u beddelaya natiijo kasta oo raadinta xiriirinta asalka ah, sidaasna ku badbaadinaya waqtiga xamuulka bogga iyo amniga weyn.
Inta lagu guda jiro raadinta Google, natiijooyinka xiriiriyeyaasha si toos ah uma aadaan goobta - waxay marka hore u diraan isticmaalaha bog ku jira serverka Google kaas oo markaa u weeciya isticmaaleha bogga ay markii hore rabeen inay galaan.
Farsamadan ayaa loo adeegsadaa in lagu raadiyo natiijooyinka raadinta ee isticmaaleyaashu ku riixaan sidaas, sida uu sheegayo Google, "waxay na siinayaan waxyaabo ka wanaagsan kana sii xayeysiinaya xayeysiinta."
Qaar badan, tani dhib maahan, laakiin mararka qaarkood markaad xiriir gaabis ah kujirto, ama haddii aad rabto inaad u dirto saaxiibbadaada xiriir ka muuqda natiijooyinka raadinta, tani waxay noqon kartaa hawl aad u adag Aan ku xuso haddii aad tahay "shirqool" aniga oo kale ah oo aanad doonaynin in qofna ku khaldo arrimahaaga gaarka ah.
Sure, had iyo jeer waxaa jira beddelka aanad isticmaalin Google gabi ahaanba. Waxaa jira qaabab kale sida DuckDuckGo, laakiin haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad ka tagto mashiinka weyn ee raadinta ee 'G', waxaa suurtagal ah in la isticmaalo ballaarinno aad u faa'iido badan si looga saaro wareejinta ay Google ku dareyso dhammaan xiriirada boggageeda (natiijooyinka raadinta, ee Google+, iwm.) .
Tusaale ahaan, si aad uga hesho bogga https://addons.opera.com/en/extensions/details/dress-up-webpage/ laga bilaabo Google +…
Ka hor intaadan isticmaalin kordhinta:
Kadib isticmaalka kordhinta:
Ku soo dejiso kordhinta Firefox Ku soo dejiso kordhinta Chromium
Caddayn: adeegsiga kordhintan ayaan ahayn taxaddar ku filan haddii ay dhacdo inaad rabto inaad si qarsoodi ah u baarto iyada oo la adeegsanayo Google. Xaaladdaas, waxaan kugula talinayaa inaad booqato bogga https://history.google.com/history/, markii hore aad ku soo gashay magacaaga isticmaale, oo aad joojiso xulashada raadraaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Sida looga fogaado iskuxirida xiriiriyeyaasha raadinta Google